Encyclopedia of Catholic Catholic
Jawaabta ugu fiican: Waa maxay beddelidda sida ay qabto Kaniisadda Kaatooligga?
Category: Ku saabsan diinta 0
Waa maxay beddelidda adiga? Beddeliddu waa erey ka soo jeedda luuqadda Laatiinka oo loola jeedo ficilka iyo saamaynta beddelidda ama beddelidda ...
Maxay yihiin astaamaha guud ee diimaha tawxiidka ah?
Maxay yihiin astaamaha guud ee diimaha tawxiidka ah? Tilmaamo gaar ah. Tawxiidka, oo ah dhaqan diimeed, waxaa lagu gartaa ahaansho: Marka laga reebo cibaadooyinka kale, tan iyo markii ...
Ciise muxuu Ilaahay ku weyddiistay tukashada?
Waa maxay sababta aad ugu tukaneyso magaca Ciise? Sayid Ciise Masiix wuxuu na barayaa tukashada, axdiyada jawaabaha la helana waa la heli doonaa. “Sidaa darteed, had iyo jeer…
Waa maxay diinta Tahuantinsuyo?
Sidee diintu u ahayd Tahuantinsuyo? Diinta ay sheegteen Inca waxay ahayd mushrikiin, taas oo ah, tiro muhiim ah oo ilaahyo ayaa lagu caabudi jiray xafladaha ay u doodaan ...
Jawaabta ugu fiican: Waa maxay Malaa'igta aqoonta?
Waa maxay malaa'igtu maantoo Isniin ah? Maalinta maamuuska malaaq -weynaha Jofiel waa Isniinta, waana sababtaas sababta ay ugu habboon tahay in loo huro ...
Muxuu Yooxanaa Baabtiisaha u soo diray Ciise inuu weydiiyo?
Muxuu Yooxanaa Baabtiisaha ka baryaa Ciise inuu weydiiyo? Yooxanaa Baabtiisaha ayaa Ciise u soo diray isaga oo weydiinaya su'aasha muhiimka ah ee ah inuu yahay kan ...
Maxaa la yiraahdaa domesyada kaniisadaha Ruushka?
Imisa kaniisadood ayuu Ruushku leeyahay? Baadari Kiril ayaa sidoo kale ku daray in Kaniisaddu ay maamusho 36.900 macbudyo oo lagu cibaadeysto, 462 ...
Waa maxay amarka ugu muhiimsan oo Ilaah siiyey Muuse?
Waa maxay amarka ugu muhiimsan? Ciise wuxuu ku jawaabay: 'Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan ....
Waa maxay habka ugu fiican ee lagu fahmi karo Kitaabka Quduuska ah?
Sideed ku bilaabaysaa akhrinta Kitaabka Quduuska ah? 10 Talooyin ku saabsan Barashada Kitaabka Quduuska ah Bilow barashadaada adigoo weydiisanaya caawimaad Eebbe. Muhiim ma aha in laga bilaabo akhriska ...
Waa kuma Luukos ee sheekada Ciise?
Waa maxay Luukos ee sheekada Ciise? Jilaaga / Jilaaga Jilaaga Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Sidee baad naftaada u barataa…
Waa salaaman tihiin! Magacaygu waa Alberto. Boggeyga, waxaan ku wadaagaa maqaallo xiiso leh oo ku saabsan caqiidada Kaatooligga, caqiidooyinka iimaanka, iyo karaamooyinka.
Su'aal: Salaadda Rabbi sidee loogu qoraa Ingiriisi?
Su'aal: Waa maxay baabtiiska biyaha ee Masiixiyiinta?
Waa maxay samayska dadka iyo diinta?
Xagee bay Ruud lagaga hadlay Kitaabka Quduuska ah?
Waa maxay ducada saliidaha quduuska ah?
Su'aasha Inta Badan La Isweydiiyo: Waa maxay noocyada dhammaystirka ee jumladda ku jira?
Imisa sano ayuu noolaa Yooxanaa Rasuulku?
DHAGEYSO DADKA HAYSTA! Dhammaan agabyada ayaa si adag loogu dhajiyay goobta si loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho! Haddii aad aamminsan tahay in dhajinta wax kasta oo ku xad gudba xuquuqdaada, hubso inaad nagala soo xiriirto foomka xiriirka oo maaddadaada ayaa laga saari doonaa.